Dhuruvangal Pathinaaru (2016) | MM Movie Store
အငွိမျးစားစုံထောကျရဲအရာရှိတဈဦးကို တပညျ့ဟောငျးတဈဦးက ဖုနျးဆကျတယျ…ဆရာရေ ကြှနျတေျာ့သားရဲလုပျခငျြနတောဗြာ…အဲ့ဒါ ကြှနျတျောက ရဲထဲကိုမဝငျစခေငျြဘူး…အဲ့ဒါ ဆရာလညျးသိတဲ့အတိုငျး စုံထောကျဘဝက ခကျခဲပငျပနျးတာတှရှေိတော့ကြှနျတေျာ့သား ဆရာ့ဆီလာရငျ ဆရာကွုံခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှမှေနျသမြှကိုပွောပွလိုကျပါ…
ဒါမှ ဒီကောငျစိတျပကျြသှားမှာ…..ကြှနျတေျာ့သားကိုဆရာ့ဆီကို လှတျလိုကျမယျဆိုပွီး ဖုနျးခသြှားတယျ…အငွိမျးစားရဲအရာရှိက တပညျ့ရဲ့သားကို ရဲဘဝက ခကျခဲပငျပနျးကွောငျးကိုပွောဖို့စောငျ့နတေယျ…သူကိုယျတိုငျကလညျး ဂြိုငျးထောကျတဈဘကျနဲ့….
ဒီလိုနဲ့ ခငျဗြားဟာ လူငယျတဈယောကျနဲ့ သကျကွီးပိုငျးရဲစုံထောကျအငွိမျးစားတဈယောကျမွကျခငျးပွငျမှာ စကားပွောနတေဲ့ အခနျးကို စစခငျြး ၇မိနဈလောကျမှာတှလေိ့မျ့မယျ…သူတို့(၂)ယောကျဟာ အမှူကိစ်စတှအေကွောငျးကိုဆှေးနှေးနကွေတယျ…..
တကယျ့ရှုတျထှေးတဲ့အမှုတှကေို သူတို့ဆှေးနှေးနကွေသလို ဖွဈခဲ့တဲ့ အမှုတှကေိုလညျး Replay ပွနျပွတယျ..တကယျ့ကို တိတိကြ အခြိနျတှနေရောတှနေဲ့….ခငျဗြား ဒီအခနျးတှကေို ဂရုတဈစိုကျကွညျ့ဖို့လိုတယျ…အခနျးတိုငျးကို မကျြခွညျမပွတျမှတျသားဖို့သငျ့သလို တဈခြို့နရောတှမှောဆို ရှကေို့ပွနျကွညျ့သငျ့ရငျကွညျ့လိုကျပါ….
ဇာတျလမျးက တကယျ့ကို ခပျသှကျသှကျနဲ့ သှားနတော..အီနတေဲ့အခနျးကိုမပါဘူး….ဒီစုံထောကျကားက ခငျဗြားကွညျ့ဖူးသမြှထဲမှာ အတျောကောငျးတဲ့စာရငျးဝငျနလေိမျ့မယျ…ဇာတျလမျးခြိတျဆကျပုံတှေ…ရိုကျထားတာတှေ..သရုပျဆောငျတာတှေ…တခွားကုလားကားတှလေို မကျြနှာတဈခုကို လေးဘကျလေးတနျပတျရိုကျတာတှမေပါသလိုကတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျမှကိုမပါ ပါဘူး…..
ဇာတျလမျးက တကယျ့ကို ခပျသှကျသှကျနောကျတဈခုပွောခငျြတာက အေးအေးဆေးဆေးဖွဈတဲ့အခြိနျမှကွညျ့ပါ…ကုနျကုနျပွောရရငျ ခငျဗြားတို့ရဲ့ မကျြတောငျခတျခြိနျကိုတောငျ အခြိတျဆှဲမခတျပါနဲ့…ကြှနျတျောပွောတာမလှနျကွောငျး ဇာတျလမျးအစ ၁၅မိနဈလောကျမှာတငျသဘောပေါကျသှားလိမျ့မယျ…စပှိုငျလာမလုပျသငျ့ဆုံး ရဲစုံထောကျကားမို့ ဒီလောကျပဲပွောပါရစေ…
အငြိမ်းစားစုံထောက်ရဲအရာရှိတစ်ဦးကို တပည့်ဟောင်းတစ်ဦးက ဖုန်းဆက်တယ်…ဆရာရေ ကျွန်တော့်သားရဲလုပ်ချင်နေတာဗျာ…အဲ့ဒါ ကျွန်တော်က ရဲထဲကိုမဝင်စေချင်ဘူး…အဲ့ဒါ ဆရာလည်းသိတဲ့အတိုင်း စုံထောက်ဘဝက ခက်ခဲပင်ပန်းတာတွေရှိတော့ကျွန်တော့်သား ဆရာ့ဆီလာရင် ဆရာကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေမှန်သမျှကိုပြောပြလိုက်ပါ…
ဒါမှ ဒီကောင်စိတ်ပျက်သွားမှာ…..ကျွန်တော့်သားကိုဆရာ့ဆီကို လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားတယ်…အငြိမ်းစားရဲအရာရှိက တပည့်ရဲ့သားကို ရဲဘဝက ခက်ခဲပင်ပန်းကြောင်းကိုပြောဖို့စောင့်နေတယ်…သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂျိုင်းထောက်တစ်ဘက်နဲ့….
ဒီလိုနဲ့ ခင်ဗျားဟာ လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ သက်ကြီးပိုင်းရဲစုံထောက်အငြိမ်းစားတစ်ယောက်မြက်ခင်းပြင်မှာ စကားပြောနေတဲ့ အခန်းကို စစချင်း ၇မိနစ်လောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်…သူတို့(၂)ယောက်ဟာ အမှူကိစ္စတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်…..
တကယ့်ရှုတ်ထွေးတဲ့အမှုတွေကို သူတို့ဆွေးနွေးနေကြသလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေကိုလည်း Replay ပြန်ပြတယ်..တကယ့်ကို တိတိကျ အချိန်တွေနေရာတွေနဲ့….ခင်ဗျား ဒီအခန်းတွေကို ဂရုတစ်စိုက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်…အခန်းတိုင်းကို မျက်ခြည်မပြတ်မှတ်သားဖို့သင့်သလို တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆို ရှေ့ကိုပြန်ကြည့်သင့်ရင်ကြည့်လိုက်ပါ….
ဇာတ်လမ်းက တကယ့်ကို ခပ်သွက်သွက်နဲ့ သွားနေတာ..အီနေတဲ့အခန်းကိုမပါဘူး….ဒီစုံထောက်ကားက ခင်ဗျားကြည့်ဖူးသမျှထဲမှာ အတော်ကောင်းတဲ့စာရင်းဝင်နေလိမ့်မယ်…ဇာတ်လမ်းချိတ်ဆက်ပုံတွေ…ရိုက်ထားတာတွေ..သရုပ်ဆောင်တာတွေ…တခြားကုလားကားတွေလို မျက်နှာတစ်ခုကို လေးဘက်လေးတန်ပတ်ရိုက်တာတွေမပါသလိုကတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှကိုမပါ ပါဘူး…..
ဇာတ်လမ်းက တကယ့်ကို ခပ်သွက်သွက်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှကြည့်ပါ…ကုန်ကုန်ပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မျက်တောင်ခတ်ချိန်ကိုတောင် အချိတ်ဆွဲမခတ်ပါနဲ့…ကျွန်တော်ပြောတာမလွန်ကြောင်း ဇာတ်လမ်းအစ ၁၅မိနစ်လောက်မှာတင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်…စပွိုင်လာမလုပ်သင့်ဆုံး ရဲစုံထောက်ကားမို့ ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေ…